Fianarana AutoCAD - Pejy 3 - Geofumadas
2.10 Ny menus context
Ny menio ny toe-javatra dia fahita matetika amin'ny programa rehetra. Hita izany amin'ny alàlan'ny fanondroana zavatra iray ary tsindrio ny bokotra ankavanan'ny totozy ary antsoina hoe "contextual" satria ny safidy asehony dia miankina amin'ny zavatra natoron'ilay kursor, sy ny fizotrany na ny baiko izay tanterahina. Jereo amin'ity video manaraka ity ny tsy fitovizan'ny ...
Raha jerena ireo fitaovana marobe izay ananan'ny Autocad dia azo zohina ho ao anaty varavarankely antsoina hoe Palettes ireo. Ny Tool Palettes dia mety ho hita na aiza na aiza ao amin'ny interface, mifamatotra amin'ny iray amin'ireo sisiny, na mijanona mitsingevana eo ambonin'ny faritra misy sary. Mba hampiasana ny paleta fitaovana, dia ampiasainay ny ...
Ny lova avy amin'ny kinovan'ny Autocad teo aloha dia ny fisian'ny fanangonana fitaovana marobe. Na dia latsaka amin'ny fampiasana aza izy ireo noho ny kofehy, azonao atao ny mampandeha azy ireo, apetraho eo amin'ny toerana misy azy amin'ny interface ary ampiasao amin'ny fotoam-piasanao raha toa mahazo aina kokoa izany. Mahita…
2.8.2 Fijerena haingana ny fampisehoana
Araka ny hitanao, ny sary sokitra tsirairay dia manana famelabelarana 2 farafahakeliny, na dia mety mbola betsaka aza izany, araka izay hianarantsika amin'izao fotoana izao. Raha te hahita ireo fampisehoana ho an'ny sary hoso-doko amin'izao fotoana izao dia tsindrio ny bokotra izay miaraka amin'ilay olona vao nianatra.
2.8 Endrika hafa amin'ny interface
2.8.1 Fijerena haingana ireo sary manokatra Izany dia singa iray amin'ny interface izay ampifandraisina amin'ny bokotra eo amin'ny toeran'ny baiko. Mampiseho ny fijerin'ny thumbnail momba ny sary manokatra eo amin'ny seha-pivoriana sy ny fampiasana azy dia tsotra toy ny fanindriana ny bokotra.
2.7 Ny baiko momba ny status
Ny bar izao dia misy bokotra maromaro izay hampivoarana tsikelikely, izay hijanona eto dia ny fampiasana azy dia tsotra toy ny fampiasana ny cursor maody amin'ny iray amin'ireo singa ao aminy. Azonao atao ihany koa ny manala na manilika ny bokiny miaraka amin'ny menuo amin'ny bar izao.
2.6 Fomba fanamafisam-peo dinamika
Ny voalaza tao amin'ny fizarana teo aloha momba ny fikandrana ny tsipika baiko dia manan-kery tanteraka amin'ny kinova Autocad rehetra, ao anatin'izany ny iray izay tanjon'ny fandinihana amin'ity fampianarana ity. Na izany aza, tamin'ny andiany 2006, dia misy fahasamihafana eo amin'ny sary tafiditra ao, ankoatra ny tena manintona, dia tena ...
Rehefa mampihetsika ny baiko fanovana tsotra isika, toy ny "Copy", dia avadikan'i Autocad ho boaty kely antsoina hoe "boatin-tsafidy" ny kursor, izay efa noresahintsika sahady tao amin'ny toko faha-2. tsipika mamorona azy ary tsindrio. Raha te hanampy zavatra amin'ny ...
Previous page pejy 1 pejy 2 pejy 3